Selisemlandweni elongenisa imikhumbi | Isolezwe
Selisemlandweni elongenisa imikhumbi
Isolezwe / 12 July 2012, 11:22am /
UNKSZ Bongi Mbambo ungene emlandweni wabesifazane abangenisa imikhumbi engobhazabhaza uma izothulula izimpahla echwebeni laseThekwini. Isithombe: Sithunyelwe
UNGENE emlandweni wokuba ngomunye wabesifazane abasebancane abangenisa imikhumbi emikhulu echwebeni laseThekwini uNksz Bongi Mbambo (30).
Ngesonto eledlule le ntokazi ingenise echwebeni laseThekwini umkhumbi iMSC Sola obuthwele inqwaba yamakhonteyina.
Usefinyelele kuleli zinga emsebenzini wakhe nje, uthe okwamenza wangena kulo mkhakha wukungazesabi izifundo iMaths neSayensi, nokumsize kakhulu.
Le ntokazi yaseMpembeni ngaphandle kwaseSikhawini ingene emlandweni wabesifazane abancane abangenisa imikhumbi emikhulu uma izothulula echwebeni laseThekwini ngesikhathi ingenisa i-MSC Sola ngoLwesine olwedlule.
Exoxa ngokungenisa lo mkhumbi uveze ukuthi akudingeki amandla uma ungenisa umkhumbi omkhulu echwebeni kodwa kudingeka uzethembe entweni oyenzayo futhi uxoxisane kahle noKapteni womkhumbi osuke ulethe impahla.
Uthe ukwenza izifundo zezibalo nesayensi kwamsebenzela ngoba ukube wayengazenzi ngabe akangenanga kulo mkhakha.
“Ngezwa ngezifundo ze-maritime (ezasolwandle) ngisesikoleni. Ngabe sengenza lowo mkhakha ngoba bengivele ngisekilasini leSayensi neMaths. Emuva kokuphothula uMatric ngathola umfundaze kwaTransnet ngabe sengingena kulo mkhakha,” kuchaza uNksz Mbambo.
Uphinde waveza ukuthi unelayisensi yokushayela ibhanoyi nokumenza abe yi-Marine Pilot.
Lokhu kusho ukuthi ukwazi ukungenisa lonke uhlobo lomkhumbi akukhathalekile ukuthi mukhulu kangakanani.
Ekhuluma ngezingqi-namba ababhekana nazo njengabesifazane abase-mkhakheni wezasolwandle ubale udaba lokaputeni abababukela phansi ngoba bengabantu besifazane.
“Siyajwayela ukusebenzisana nabantu abanjalo futhi nabo uma bebona ukuthi uyazethemba futhi uyayazi nento oyenzayo bagcina sebengenayo inkinga yokusebenzisana nomuntu wesifazane,” kusho uNksz Mbambo.
Ugqugquzele izingane zamantombazane ukuba zingene kulo mkhakha ngoba maningi amathuba omsebenzi kuwona.
“Uma wenza izifundo iMaths neSayensi kungakuhle ukuthi ungene kulo mkhakha we-Maritime ngoba uma usuphothule izifundo zakho uzowuthola umsebenzi,” kusho uNksz Mbambo.